Amandla emakethe embonini yezithuthuthu engenakulinganiswa, edala amathuba amahle kakhulu iChina isingene ezinhlwini zabakhiqizi abakhulu be-sprocket emhlabeni, kepha ngokubuka kwamandla amakhulu kanye nentuthuko, ukukhishwa komuntu ngamunye kweChina kwezimoto ...
Ukuhlaziywa Kwenqubo Yokugeleza Kwesendlalelo seCarburized Ngesikhathi Sokucubungulwa Kwesithuthuthu Esifinywa
(1) Iziphethu zesithuthuthu ezi-Carburized zidinga ungqimba we-carburized ebusweni bamazinyo. Lapho inqubo ye- "carburized-warm extrusion" isetshenziswa, ukusatshalaliswa kongqimba lwe-carburized kuhlobene kakhulu nendlela yokuguqula okwenziwe ngamagiya. Ngenqubo yokuqhekeka kwe-tangential split, ...
Ukucindezelwa ngokwelashwa kokushisa nokuhlukaniswa kwe-sprocket yesithuthuthu
Ingcindezi yokwelashwa ngokushisa ingahlukaniswa kube ukucindezela okushisayo nokucindezela kwezicubu. Ukuhlanekezelwa kokwelashwa kokushisa kwe-workpiece kungumphumela womphumela ohlangene wokucindezela okushisayo nokucindezela kwezicubu. Isimo sokucindezelwa kokwelashwa kokushisa ku-workpiece kanye nomphumela okukubangelayo kuhlukile. Isibalo ...